रिया–महेश भट्टको ह्वाट्सएप च्याट सार्वजनिक, रियालेनै तोडेकी थिइन सम्वन्ध ! « Pen Nepal
रिया–महेश भट्टको ह्वाट्सएप च्याट सार्वजनिक, रियालेनै तोडेकी थिइन सम्वन्ध !
Published On : 21 August, 2020 1:47 pm By : पेननेपाल
एजेन्सी । सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्यु प्रकरणबारे व्यापक अनुसन्धान भइरहेको छ । ८ जूनमा जब रिया सुशान्तको घरबाट निस्किएकी थिइन् तब उनले निर्देशक महेश भट्टसँग कुराकानी गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएको छ । उनले महेश भट्टसँग आफ्नो र सुशान्तको सम्बन्धबारे कुरा गरेको स्रोतले बताएको छ । उक्त च्याट भाइरल हुने बित्तिकै मानिसहरुले रिया आफैंले सुशान्तसँग सम्बन्ध तोडेको अनुमान गरिँदैछ ।